Shiinaha EV xeedho batari 6.6KW dusha xeedho si deg deg ah ku amraya 30a 50a 60a 90a Soo saar iyo Warshad | Lingxiang
Warshadaha xeedho-DC 12V-600V
1. Danab gelinta waa mid guud, baaxadda naqshaduna waa AC96V-264V; waxay ku habboon tahay heerarka danab ee gobol kasta oo adduunka ka mid ah;
2. Awoodda sare, soo gelinta AC waxay qaadataa sixitaanka awoodda firfircoon ee firfircoon (APFC), kuleylka waa yar yahay, eberna wasakheynta shabakadda korantada waa la ogaan karaa;
3. Tikniyoolajiyada buuxinta koolada oo si buuxda uxiran, xeedho-qaataha ayaa qaadata gebi ahaanba ku lifaaqan buuxinta koolada teknoolojiyada silica kuleylka, darajada IP66, iska caabinta naxdinta wanaagsan, waxqabadka kala-baxa kuleylka wanaagsan iyo nolosha dheer;
4. Qalooca lacag-bixinta firfircoon ayaa lagu qalabeeyaa kombiyuutar dhexdiisa, iyo qaabka lacag-bixinta lagu hagaajin karo goobta. Ku habboon dhammaan noocyada baytariyada lithium. Isku xidhka xidhiidhka ee 'CAN', wuxuu xaqiijin karaa isgaadhsiinta waqtiga dhabta ah ee BMS ee leh baska CAN;
5. Waxqabadka sare ee nabadgelyada, biyuhu, shoogga, ceeryaanta aashitada, boodhka iyo naqshadeynta go'doomin ee la xoojiyay, taas oo ka dhigaysa mid nabdoon oo lagu shaqeyn karo deegaan kasta;
6. Isku halaynta sare, heerkulka ballaadhan ee heerkulka shaqada: -40 ℃ - + 60 ℃. 100% baaritaanka gabowga xamuulka oo buuxa, tiknoolajiyada beddelashada jilicsan luminta hooseeya ee qalabka korontada, waxtarka guud ee sarreeya (≥93%), keydinta tamarta iyo keydinta awoodda.
Magaca Xeedho batari EV 6.6KW dusha xeedho si deg deg ah ku amraya 30a 50a 60a 90a
Cabir 420 * 295 * 113mm
Hydride nikkel-metal, nikkel-cadmium, baytariyada nikkel-chromium, iwm
IP 66Dayaanna （Biyo-la’aan, boodh-celin la'aan, qarax-celin, shoogga）
Waqtiga galinta 32A
Awoodda wax soo saarka 6600W
Dhererka fiilada wax soo saarka 1M
Hore: Xeedho batari EV 6.6KW dusha xeedho si deg deg ah ku amraya 30a 50a 60a 90a
Xiga: On xeedho guddiga 48v 72v 96v 144v xeedho batari lithium batari iyo xeedho batteriga
Heer aan la mid ahayn oo tayo iyo adeegba leh Waxaan siineynaa adeegyo xirfadaysan oo habeysan oo loogu talagalay kooxaha iyo shaqsiyaadka Waxaan sare uqaadeynaa adeegeena annagoo qiimeyneyna qiimaha ugu hooseeya.
Sichuan Lingxiang Technology Co., Ltd. waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo isku dhafan R&D, wax soo saar, iib iyo adeeg. Shirkaddu waxay inta badan ku hawlan tahay soo saarista iyo soo saarista qalabka ku shaqeeya tamarta cusub.
Aaga A, Dhismaha 4 MAYA. 200 Of Tianfu Fifth Street.Chengdu Shiinaha Aagga Tiknoolajiyadda Sare